(xoog leh) (xanh trắng) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + Fe (OH)2 H 2H2O + FESO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2SO4 (sulfuric acid) waxay kaga falcelisaa Fe(OH)2 ()?
Fe (OH) 2 waxay la falgashaa H2SO4
Dhacdada ka dib H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa Fe (OH) 2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + Fe (OH)2 H 2H2O + FESO4
Kharashka2 + H2SO4 → H2S + S + FESO4
Pyrite; Marcsite acid sulfuric hydrogen sulfide baaruud
(rnn) (digo yara) (kh) (rnn) (digo yara)
(waa wax la yaab leh) (xoog leh) (jacayl, jacayl dhab ah) (maya chanh) (wax badan)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta FeS2 + H2SO4 → H2S + S + FESO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee FeS2 (Pyrite; Marcasite) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2S (hydrogen sulfide) iyo S (sulfur) iyo FeSO4 ()?
Dhacdada ka dib FeS2 (Pyrite; Marcasite) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada FeS2 + H2SO4 → H2S + S + FESO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee S (sulfuric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh S (sulfur) badeecad ahaan?
birta acid sulfuric hydrogen
(rnn) (digo dhach pha loãng) (kh) (dd)
(sax ah) (xoog leh) (xoog leh) (la soco)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe + H2SO4 → H2 + FESO4
Waa maxay xaaladda falcelinta Fe (birta) ee ay la falgasho H2SO4 (sulfuric acid)?
Xaaladda Kale: deegaanka CO2
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo FeSO4 ()?
Fe ayaa la falgala H2SO4
Dhacdada ka dib Fe (birta) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe + H2SO4 → H2 + FESO4